"INdawo"-Ulwandlekazi olumangalisayo kunye nokuJongwa kweTreetop
"Indawo"-Umlambo iWye umi kwindawo entle yeOtway Ranges engqongwe lihlathi elishinyeneyo kunye nemibono yolwandle enika umdla. Yimizuzu eli-10 kuphela yokuhamba ukuya elwandle oluselwandle / i-Wye River Pub, ivenkile ngokubanzi enecafe, kunye nomgama omfutshane we-20 min ukusuka kubakhenkethi iMecca yaseLorne. Le yindawo yokuzonwabisa, ukuhlola kunye nokuvuselela.
"Inqaku" lijikelezwe yi-bushland, inika ubumfihlo kunye nemibono emangalisayo yolwandle engaphazanyiswa.
Uyilo loyilo kunye nenkosi eyakhiwe kwiminyaka emi-5 eyadlulayo.
ENTSHA: i-nbn-fiber kwindawo esanda kufakelwe i-intanethi ekhawuleza kakhulu.
Uyilo olukumgangatho ophezulu kwindawo ephakamileyo, lubandakanya amagumbi okulala ama-3, amagumbi okuhlambela ayi-2, ikhitshi evulekileyo yesicwangciso esivulekileyo / indawo yokutyela / yokuhlala, indawo yokugcina kunye negqwesileyo yokupaka imoto phantsi kwekhava.
Ukufakwa kwangaphakathi kungokunje kwaye kucocekile, kunye nezinto ezongezelelweyo umz. inkonzo isimumu iweyitara phakathi kwamanqanaba, jet master indawo yomlilo evulekileyo, umphezulu webhentshi yamatye kunye nomgangatho kwiindawo ezimanzi, umgangatho wamaplanga we-bamboo, ukufudumeza / ukupholisa, izibane ezimangalisayo zangaphakathi / zangaphandle kunye nefenitshala epheleleyo.
Ikhaya elimangalisayo eliyilwe ngobuchule elunxwemeni kwindawo ekhethekileyo eWye River!
I-Wye River yidolophu entle, ezolileyo, enobuhlobo, ephakathi kwe-Otway National Park entle. Ime kwindlela ebukekayo iGreat Ocean Road phakathi kwedolophu yabakhenkethi ephambili kunxweme lwe-surf-iLorne kunye nedolophu enqabileyo yokuloba kunye nokusefa iApollo Bay. Le ndawo ibonelela ngendlela entle, ulwandle kunye nokuhamba nge-rockpool, ukusefa okukhulu, ukuloba kunye nokukhwela ibhayisekile kubahambi abasebenzayo. Ikwayindawo entle kakhulu yokuphumla kwaye uhlaziye kwakhona kwikhaya lethu phakathi kwemithi enembono yolwandle. Umbindi wedolophu yiWye Beach Hotel Pub kunye neVenkile yeVenkile kunye neCafe enekofu entle kunye nabasebenzi abanobuhlobo. I-Wye River Surf Lifesaving Club ijikeleza elunxwemeni ehlotyeni nangeempelaveki ukuze ibonelele ngolwandle olukhuselekileyo lokuqubha kuyo yonke iminyaka. Zininzi izinto onokukhetha kuzo zokuthenga kunye nezokutyela ezifumanekayo eLorne, -imizuzu engama-25 kude, ke ukuba uyazenzela ukutya, kungcono ukuthenga apho usendleleni edlula eLorne.
Ndiza kufumaneka ngefowuni ukuphendula imibuzo yakho okanye izinto ezikuxhalabisayo.